Amanqaku - UkuThengiswa koNikezelo olulandelayo
INextschain sesinye sezona zisombululo zibalaseleyo kuzo zonke ze-e-yorhwebo zokukhulisa ishishini lakho lokuwisa.
01 / Amawakawaka eemveliso eziwinayo
Iimveliso zokuphumelela sisitshixo sokuqhuba ivenkile ephumeleleyo kwi-Intanethi. Yeka ukuchitha imali kwiimveliso ezimbi, i-NextsChain iqeshe ingcali ukuba ibonelele ngamawaka eemveliso eziwinayo ukunceda abathengi abathengayo benze ukuthengisa kube lula.
02 / Ukuhanjiswa kweHlabathi liphela
I-NextsChain iqabane kunye nabaphethe ama-300 + kwihlabathi liphela ukukuzisela izinto ezininzi ezifikelelekayo nezithembekileyo zokuhambisa ngenqanawe. Isiseko kwinkqubo yethu ekrelekrele sinokuthi siphephe ngokulula ukuvimba ngexesha elixakekileyo njengeKrisimesi kunye noLwesihlanu oMnyama, ngeli xesha sikwabonelela ngokulandela umkhondo.
03 / Ukugcwalisa iiMiyalelo kwiBulk
Unako ukuzalisekisa ii-odolo zakho zemihla ngemihla ngobuninzi ngokucofa nje ezimbalwa endaweni nganye nganye, siya kupakisha kwaye sithumele iimveliso ngqo kubathengi bakho.
04 / Uluhlu lweZinto eziZenzekelayo kunye neXabiso lohlaziyo lwemihla ngemihla
Ijonga amanqanaba esitokhwe mihla le kwaye igcina izinto zakho kumanqanaba esitokhwe kwaye isebenzise imigaqo yamaxabiso ukuvuselela amaxabiso ezinto ngokuzenzekelayo.
05 / Facebook kwiintengiso ekujoliswe kuzo
Iintengiso zikaFacebook yenye yezona ndlela zintengiso zokuqalisa ukuthengisa, kwaye sibonelela ngokuchanekileyo kwiintengiso zeFacebook kuyo yonke imveliso ephumeleleyo, ngenjongo yokunceda abathengisi bakwaShopify bandise ukuthengisa kwabo kwe10X.
06 / uphawu lokuthengisa kunye nokupakisha
Zonke iipakeji ziya kuthunyelwa phantsi kwegama lakho, kwaye sikwabonelela ngokupakisha okwenzelwe wena ukukunceda wakhe uphawu lwakho.